Raiisel wasaaraha Pakistan Imran Khan wuxuu tijaabiyay COVID - Wardeeq 24 TV Raiisel wasaaraha Pakistan Imran Khan wuxuu tijaabiyay COVID Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Raiisel wasaaraha Pakistan Imran Khan wuxuu tijaabiyay COVID
Raiisel wasaaraha Pakistan Imran Khan wuxuu tijaabiyay COVID
Raiisel wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa laga helay COVID-19, xafiiskiisa ayaa yiri, kaliya labo maalmood kadib markii laga talaalay cudurka.
“Waqtigan xaadirka ah, xafiiska ra’iisul wasaaraha wuxuu xaqiijin karaa oo keliya in ra’iisul wasaaraha sharafta leh uu tijaabiyay COVID-19 isla markaana uu iskiis u go’doomay, waxaan sii deyn doonaa faahfaahin dheeri ah waqtigeeda,” ayuu yiri xafiiskiisa Sabtida.
Bakistaan ​​waxay ka heshay Shiinaha qaybtii labaad ee 500,000 oo tallaal ah
Baakistaan ​​waxay kordhisay xayiraadaha COVID iyadoo lagu jiro mowjad saddexaad
Pakistan waxay bilawday talaalka COVID ee talaalka dadka waayeelka ah
Khan, oo 68 jir ah, ayaa helay tallaal Sinopharm ah oo Shiinaha soo saaray khamiistii, iyada oo waddanku la dagaallamayo mawjadda saddexaad ee fayraska.
Khan wuxuu waday shirar joogta ah oo joogto ah baryahan dambe, oo ay kamid tahay kaqeybgalka shir amniga looga hadlayo oo kadhacay caasimada, Islamabad, oo ay kasooqeyb galeen dad aad ufarabadan.
Wuxuu khudbad kajeediyey shirka isagoon waji xidhnayn, wuxuuna kaqeyb galay kulan kale oo lagu daah furayay mashruuc guriyayn loogu samaynayo dadka saboolka ah oo qaabkan oo kale loo qabtay jimcihii.
Dalka Koonfurta Aasiya oo ay ku noolyihiin 220 milyan ayaa waxaa si aad ah ugu soo badanaya cudurada ku dhaca coronavirus
Marka loo eego tirooyinka ay sii deysay dowladda Sabtidii, 3,876 qof ayaa laga helay 24-kii saac ee la soo dhaafay – tirada ugu badan ee maalin kasta la qaado cudurrada tan iyo horraantii bishii Luulyo – iyadoo wadarta guud ee infekshannada dalka laga qaaday 620,000 qof.
Waxaa sidoo kale jiray dhimashada 42 kale, oo wadarta guud ka dhigeysa 13,799.
Pakistan waxay talaal u bilawday bulshada guud 10-kii Maarso, iyada oo laga bilaabay dadka waayeelka ah kadib markay arkeen jawaab celin liidata shaqaalaha caafimaadka safka hore, oo muujiyay walaacooda talaalada Shiinaha.
Shiinaha Sinopharm iyo CanSinoBIO, Oxford-AstraZeneca, iyo tallaalka Ruushka ee Sputnik V ayaa loo oggolaaday isticmaalka degdegga ah ee Pakistan.
Previous articleQatar: Dib-u-habeynta sharciyada shaqaalaha ayaa ‘wax ka beddelay’ suuqa
Next articleAsteroid-ka ugu weyn ee 2021 si loogu dhawaado Dhulka